Haino aman-jerin’i Onitiana Realy Nahazo taratasy fampitandremana
ny fahabangam-bola mihoapampana nefa tsy voazava tao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Rehefa nandeha ny fanadihadiana, voalaza fa 150 tapitrisa Ariary no tsikaritr’ireo mpitsirika teo am-piandohana, herinandro lasa izay. Niitatra hatrany amin’ny 3 miliara Ariary ny vola banga, voahodinkodina teo anelanelan’ny taona 2019-2020 rehefa nohalalinina ny fitsirihana. Voapaingotra ny «Trésorier Municipal», izay raha ny lojika dia tsy toerana politika fa olona tendren’ny fanjakana tahaka ny delege. Araka ny loharanom-baovao dia niaiky io fanodinkodinana io ity farany. Efa niezaka nanentsina ny banga ihany izy saingy tsy feno ara-potoana, talohan’ny nahatongavan’ireo Mpitsirika ankapobeny ara-panjakana, raha ny loharanom-baovao hatrany. Raha nandray ny fahefana ny mpitantana ny Kaominina teo aloha notarihin-dRtoa Lalao Ravalomanana tamin’ny taona 2015, dia nilaza fa hatrany amin’ny 44 miliara ariary ny trosa sy fahabangana navelan’ny teo alohany.